2014 New Year Present -`အသက်ရှည်ကျန်းမာချင်လျှင်၊စားသောက်နေမှုဘ၀ကိုပြင်´ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Editor's Choice » 2014 New Year Present -`အသက်ရှည်ကျန်းမာချင်လျှင်၊စားသောက်နေမှုဘ၀ကိုပြင်´
2014 New Year Present -`အသက်ရှည်ကျန်းမာချင်လျှင်၊စားသောက်နေမှုဘ၀ကိုပြင်´
Posted by padonmar on Jan 1, 2014 in Editor's Choice, Health & Fitness, My Dear Diary | 35 comments
29-12-2013 နေ့ ဓမ္မဗျူဟာ
USA မှ O.G Dr.ခင်နွယ်ဝင်း၏
ကျန်းမာရေးပညာပေး ဟောပြောပွဲ ကောက်နှုတ်ချက်
Dr.ဒေါ်ခင်နွယ်ဝင်းဟာ ၁၉၇၁ ခုနှစ်က မြန်မာပြည်မှ M.B.,B.S ဘွဲ့ရခဲ့ပြီး ၁၉၇၄ မှာ အမေရိကားသို့ ထွက်ခွာ အခြေချခဲ့တဲ့ မီးယပ်သားဖွားပါရဂူ ဖြစ်ပါတယ်။၂၀၀၀ ခုနှစ် အလုပ်က အနားယူပြီးချိန် ကစပြီး ပရဟိတလုပ်ငန်းများ လုပ်ကိုင်နေသူဖြစ်ပါတယ်။ အသက်နှင့် မလိုက်အောင် ကျန်းမာနုပျိုနေသူလည်း ဖြစ်ပါတယ်။
alternative medicine ခေါ်တဲ့ နွယ်မြက်သစ်ပင်တွေကနေ လူတွေအတွက် အကျိုးရှိ ကျန်းမာစေမယ့် နည်းပညာတွေကို အင်တာနက်က ရှာဖွေ ဖတ်ရှုလေ့လာ သုတေသနပြု ပြီး မိတ်ဆွေများကို မျှဝေပေးခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။
မြန်မာပြည်မှာ လူတွေဟာ သွေးတိုး၊ ဆီးချို ၊လေငန်း၊ကင်ဆာ၊ဘီပိုးစီပိုး တွေကြောင့် ဆေးကုကြရ၊ ငွေကုန်ကြေးကျ များနေကြရ၊အသက်တိုနေကြရတာရဲ့ အကြောင်းရင်း ဖြစ်တဲ့ ကိုယ်ခံအားမကောင်းကြခြင်းကို မပြုပင်ကြပဲ အကျိုးဖြစ်တဲ့ ရောဂါဝေဒနာကိုသာ ကုသ နေကြတာ တွေ့ရပါတယ်။ဒါတွေကို မိမိဖာသာ အစားအသောက် အနေအထိုင် ပြုပြင်လိုက်ရင် ငွေကုန်ကြေးကျ မများပဲ ပိုမိုကျန်းမာသက်ရှည်တဲ့ ဘ၀တွေကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
အန္တရာယ်မဖြစ်စေနိုင်တဲ့ နည်းလမ်းတွေဖြစ်တာကြောင့် ကိုယ်တိုင်လေ့လာ စမ်းသပ် ကြည့်ကြဖို့ တိုက်တွန်း ချင်ပါတယ်။
၁။ ဆီများကို တခါသုံးပြီး ပြန်မသုံးပါနှင့်။ (Transfat ကြော်ပြီးဆီသည် ကင်ဆာကိုဖြစ်စေပါသည်)
ဆီကို အငွေ့ပျံသည်ထိ အပူမပေးပါနှင့်။
ဟင်းချက်လျှင် ဆီမသတ်ပဲ လုံးချက်ပါ။
အသားများကို ရှလကာရည်အနည်းငယ်ထည့်ပြီး မီးအေးအေးချက်ပါ။
ဟင်းသီးဟင်းရွက်နူးအောင် အရင်ပြုတ်ပြီးမှ ဆီနှင့်ကြော်ပါ။(ဆီစိမ့်ဝင်မှုလျော့စေရန်)
၂။ ဒန်သတ္ထုများသည် အာရုံကြောနှင့် ဦးနှောက်အတွက် အဆိပ်ဖြစ်တတ်၍ ဒန်အိုးအစား စတီးအိုးသုံးပါ။
၃။ Non-Stick ဒယ်အိုးများသုံးလျှင် အိုးထဲတွင် ဘာမျှမရှိပဲ အပူမပေးပါနှင့်။
၄။ Microwave oven ကို ဟင်းချက်ရန် မသုံးပါနှင့်။
၅။ အချိုမူန့် ၊ သကြား ၊ ငံပြာရည်ရှောင်ပါ။
ငံပြာရည်အစား ဆားသာသုံးပါ။(ငံပြာရည်တွင် အချိုမှုန့်များပါနေတတ်သောကြောင့်)
၆။ ဒန်ပစ္စည်း+ပြဒါး+ဖလူရွိုက်ပေါင်းလျှင် အဆိပ်ဖြစ်စေတတ်သောကြောင့် ရှေးကသွားဖာရာတွင် Aluminium, Mercury သုံးထားလျှင် အစားထိုးပစ်ပါ။
၇။ ခပ်နွေးနွေးအနေအထားတွင် ပိုးများပိုပွားနိုင်သောကြောင့် ချက်ပြီးဟင်းများကို အပူ(သို့)အအေးသာထားပါ။ မီးငွေ့ငွေ့ဖြင့် ခပ်နွေးနွေးအနေ မထားပါနှင့်။
၈။ Paracetamol သည်အသည်းကို ပျက်စေနိုင်သောကြောင့် ဖြစ်နိုင်လျှင်ရှောင်ပါ။ မဖြစ်မနေသောက်ရန် လိုအပ်ပါက Grape Fruit ဂရိတ်ဖရုသီး/ရည် နှင့်တွဲသောက်ပါ။
(က) ပိုးသတ်ဆေး+ပိုးမွှားများ ကုန်စင်အောင် ရေ ၁ ဂါလံ တွင် ရှလကာရည် ထမင်းစားဇွန်း ၂ဇွန်း ရော၍ ၅မိနစ် စိမ်ပါ။ ပြီးမှရေစင်အောင်ဆေး၍ ၁မိနစ် ပြုတ် (သို့) ပေါင်းပါ။
 ကိုက်လန် ၊ ဟင်းနုနွယ် ၊ မုန်လာဥနီ ၊ ရဲယိုရွက် ၊ မယ်ဇလီရွက် ၊ သင်္ဘောရွက် ၊ ကန်ဇွန်းရွက် ၊ မုန်ညင်း ၊ မြင်းခွာရွက် ၊ ခရမ်းချဉ်သီး ။
 ပန်းဂေါ်ဖီ(ဖြူ) ၊ ပန်းဂေါ်ဖီစိမ်း ၊ ဂေါ်ဖီထုပ်(ခရမ်း) ။(ကင်ဆာကာကွယ်သည်)
၂။ နနွင်းမှုန့်စစ်စစ် ¼ လက်ဖက်ရည်ဇွန်း+သံလွင်ဆီနှင့်ဖျော်သောက်ပါ။ (ကင်ဆာကာကွယ်နိုင်သည်။) သွေးတွင်းအချိုဓာတ်ကျနိုင်သဖြင့် အစာစားပြီးမှသောက်ပါ။
၃၊ဆီးချိုရောဂါ ကာကွယ်ရန် သစ်ကြမ်းပိုးမှုန့် လက်ဖက်ရည်ဇွန်း ½ နေ့စဉ်သောက်ပါ။
၄။ မှတ်ဉာဏ်လျော့ပါးမှု ကာကွယ်ရန် Vit B12 5000 mg နေ့စဉ် သောက်ပါ။ Folic Acid သောက်ပါ။
၅။ ရင်သားကင်ဆာ ၊ ဆီးကြိတ်ကင်ဆာများ ဖြစ်စေတတ်သည့် ဖလူရွိုက်ကို ဖယ်ထုတ်ရန် အိုင်အိုဒင်းပါသော ကျောက်ပွင့်စားပါ။ Iodoral ဆေးသောက်နိုင်သည်။
၆။ ၀မ်းပျက်ဝမ်းလျှော ကာကွယ်ရန် အူလမ်းကြောင်းထဲရှိ ကောင်းသောပိုးများကို အားပေးသော ဒိန်ချဉ် (သကြားမပါ) သောက်ပါ။ Probiotic 10 သောက်နိုင်သည်။
၇။ ခရမ်းလွန်ရောင်ခြည်ကာကွယ်သော နေကာမျက်မှန်ကို မျက်စိတိမ်ရောဂါကာကွယ်ရန် တပ်ဆင်ပါ။
၈။ နေ့စဉ် အနည်းဆုံး နာရီဝက် လမ်းလျှောက်ပါ။ လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ပါ။
၉။ အရိုးပါးရောဂါကာကွယ်ရန် 3-5 lb အလေးဖြင့် တနေ့လျှင် နာရီဝက်ခန့် ကြွက်သားများ သန်မာအောင် လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ပါ။ တံတောင် ၊ ခြေဖျားထောက်လျက် မှောက်လျက် အနေအထားဖြင့် ဒူးနှင့်ကြမ်းမထိပဲ နေသည့်လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ပေးပါ။
၁၀။ အစာစားပြီးတိုင်း (သို့) ညအိပ်ရာဝင်လျှင် သွားကြားမှ အစာကြွင်းကျန်များကို Dental Floss သုံး၍ ကုန်စင်အောင် ထုတ်ပစ်ပါ။
၁၁။နှစ်နှစ်ခြိုက်ခြိုက်အိပ်ပျော်နေချိန်သည် တနေ့တာလုံး ပျက်စီးယိုယွင်းထားသမျှကလာပ်စည်းများကို ခန္ဓာကိုယ်က ပြန်လည်ပြုပြင်နေချိန် ဖြစ်သောကြောင့် အိပ်ရေး၀၀အိပ်ရန် လိုပါသည်။
၁၂။ နှလုံးကြွက်သားများအတွက် အားပေးသော D-Ribose ကိုအလွန်မောပန်းလျှင်/ ရင်ပတ်အောင့်လျှင် ၁ဇွန်း ရေ(သို့)ဖျော်ရည်နှင့်ဖျော်သောက်ပါ။
၁၃။ နှလုံးခုန်မမှန်ခြင်း ၊ လေဖြတ်ခြင်း ကာကွယ်ရန် Magnesium Citrate သောက်ပါ။
၁၄။ သြဇာဓာတ်နှင့်တူသော Vitamin များသောက်သုံးရန်လိုပါသည်။
၁၅။ နေ့စဉ်သောက်သုံးသင့်သော အားဖြည့်အစာများ(Supplements)မှာ
Vit C , Vit E , CoQ10 , Selenium , R- Lipoic Acid , Magnesium , B12
နှလုံးခုန်မမှန်မှု၊၀မ်းချုပ်မှုတွေကာကွယ်ပေးတဲ့ Magnesium +ကင်ဆာကာကွယ်တဲ့ CoQ10
သွေးအချိုဓာတ် ကျစေတဲ့ သစ်ကြမ်းပိုးခေါက်အမှုန့်
ရင်သားကင်ဆာ+ဆီးကြိတ်ကင်ဆာ ကာကွယ်တဲ့ အိုင်အိုဒင်း
ဦးနှောက် အာရုံကြောအားကောင်းစေတဲ့ B12 +၀မ်းပျက်ဝမ်းလျှော ကာကွယ်တဲ့ Probiotic
ကင်ဆာကာကွယ်တဲ့ Selenium နှင့်
ချစ်သော ရွာသူားများကို နှစ်သစ်လက်ဆောင်အဖြစ် ကျန်းမာရေးကောင်းစေမယ့် အကြံပြုချက်များ တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။
အကယ်၍ အကြောင်းအရာများချွတ်ချော်မှုရှိခဲ့လျှင် မှတ်တမ်းတင်တဲ့ ကျမရဲ့ အားနည်းချက်သာဖြစ်ပါတယ်။
အမေရိကားက ဆရာဝန်မရဲ့ ဟောပြောချက်ဖြစ်တာကြောင့်
အချို့နေရာတွေမှာ မြန်မာပြည် လူများစုဘ၀တွက် တထပ်တည်းမကျနိုင်တာလေးတွေကိုတော့ သည်းခံပေးကြစေလိုပါတယ်။
အချို့ ဆေးတွေက မြန်မာပြည်မှာ ရှိပေမယ့် အချို့ဆေးတွေက အလားတူတောင် မရှိပါဘူး။ဒါပေမယ့် မြန်မာပြည်မှာ ပေါများတဲ့ အစားအသောက်တွေထဲမှာ ပါဝင်ပြီးဖြစ်ပါတယ်။
သေချာဖတ်ကြည့်ရင် ငွေကုန်မများပဲ ကျန်းမာသက်ရှည်တဲ့ ဘ၀ကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်မှာဖြစ်လို့ ဆေးဝါးကို အဓိကမထားပဲ အစားအသောက် အနေအထိုင် ပြု ပြင်ကြဖို့ တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်။
ကဆာမိ၊နှစ်သစ်မှာ ပထမဆုံး အားပေးတဲ့ သူအဖြစ်မှတ်တမ်းတင်လိုက်ပါတယ်။ကျေးကျေးပါ။
ဗဟုသုတ ရစေတဲ့ ပိုစ့်ကောင်းတစ်ပုဒ်ပါ
ကျန်းမာရေး ဗုသုတတွေ ပွားရပါသဗျ …
တီတီ လက်ဆောင် ကြီးမားလှပါပေတယ် ခင်ဗျာ ..
ကျေးဇူးပါအန်တီဒုံရေ။ ကူးယူမှတ်သားသွားပါတယ်။ မသိသေးတာလေးတွေလဲပါလို့ အရမ်းအကျိုးရှိပါတယ်။
နှစ်သစ်ကူးလေး ဒီလို အကျိုးရှိတဲ့ ပို့(စ) ကို ဖတ်ရလို့ ကျေးဇူးတင်ပြီး လိုက်နာဖို့ကြိုးစားနေပါတယ် တီဒုံ။
ဒါမဲ့ ဒီ ၃ ရက်ကတော့ စားပွဲတွေဆက်ပြီး များဂျီး စားမိနေတယ်။
ကျေးဇူးပါ အန်တီမာရေ။ တစ်ခုတော့ မေးချင်ပါတယ်။ ငြုပ်ပုက မှိုတက်တယ်။ မှိုတက်တာကို ရေဘယ်လောက် ဆေးဆေး စင်ဖို့ဘယ်လွယ်ပါ့မလဲ။ မှိုပါတဲ့ ငြုပ်ပုကို ထောင်းပြီး ဆီသတ်လိုက်ရင်တော့ ဆီပူကြောင့် မှိုသေတယ် မဟုတ်လား။
အဲလို မဟုတ်ဘဲ အသားဟင်းကို လုံးချက်မယ်ဆိုရင် ထောင်းပြီးသား ငြုပ်ပု၊ ကြက်သွန်ဖြူ+နီရောပေါ့လေ။ အဲဒါတွေက ဆီပူ မမိ၊ ရေပူသာမိမှာဆိုတော့ မှိုသေပါ့မလား။
ငရုပ်သီးမှို၊မြေပဲမှို လိုမျိုး (Aflatoxin B)အစားအသောက်မှိုတက်ရင် မနှမျောပဲ လွှင့်သာပစ်လိုက်ပါ။
ငရုပ်သီးကို သူပေါ်တဲ့အချိန်မှာဝယ်၊ကိုယ်တိုင် နေပြန်လှန်းပြီး စိတ်ချရတဲ့ အမှုန့်ကြိတ်စက်မှာ ကြိတ်ပါ။(သို့) နေကြွပ်ကြွပ်လှန်းပြီး Blender (သစ်သီးဖျော်တဲ့ အရှည်မဟုတ်၊အမှုန့်ကြိတ်တဲ့ အပုလေးနဲ့)နဲ့ကြိတ်၊ပုလင်းထဲထည့် အပေါ်က ဆားသိပ်ထား၊အရောင်မပြောင်းတော့ပါ။ရေခဲသေတ္တာရှိရင် ထည့်ထား၊နှစ်လုံးပေါက်စားလို့ရပါတယ်။
မြန်မာတွေအစားစားတာမှာ ငရုပ်သီးမုန့်က မပါမဖြစ် ဖြစ်နေပြီး.. အဲဒီမှာမှ.. စွတ်စိုရေငွေ့များတဲ့ ရာသီဒေသဖြစ်တော့ အရာရာမှိုတက်စေတဲ့တိုင်းပြည်လည်းဖြစ်နေပြန်ပါတယ်..။
ဒီကိစ္စ… သေသေချာချာကို.. ပညာပေးလုပ်သင့်တယ်ထင်မိတယ်..။
ဒီပို့စ်လေးကို.. သတင်းစာထဲထည့်ပြီး ပုံနှိပ်ဖေါ်ပြခွင့်တောင်းပါကြောင်းနဲ့..
၁၂ရက်နေ့ တွေ့စုံပွဲအတွက်.. လက်ဆောင်လေးများ အမြန်စီစဉ်ပို့လိုက်ပါကြောင်း.. သတင်းပို့ပါ၏ခင်ဗျာ…
ကြီးတော်နွားကျောင်းပြီး.. အခမဲ့ ကူလီထမ်းရင်း.. စီစဉ်ပေးပါဦးနော…။
မေးမိတာ တော်သေးတယ် အန်တီမာ။ အဲဒီကိစ္စကြီးကို အိမ်ရှင်မ အတော်များများ မသိလောက်ဘူး။ ဒါကြောင့် ဆီပြန်ချက်မှ မှိုသေတယ်ဆိုပြီး ကြက်သွန်နီတောင် အခွံနွှာပြီးရင် ရေမဆေးတော့ဘဲ ထည့်ထောင်းပြီး ဆီသတ်ချက်နေကြတာ။ ကြက်သွန်နီက မှိုစွဲတာများတယ်။ ပြီးတော့ မှိုမပါတဲ့ ငရုတ်သီးဆိုတာလည်း ရှားလွန်းပါတယ်။ ဆိုင်ချက်တွေ ၀ယ်မစားသင့်တော့ဘူးပေါ့။ မှိုကိစ္စကတော့ ခုထိကို မရှင်းနိုင်သေးတာ။ လက်ဖက်၊ ပဲမှုန့်၊ ဒါတွေမှာ မှိုရှောင်ဖို့မလွယ်။ ဒါကြောင့် မှိုမတက်အောင် ဆိုးဆေးသုံးတာပေါ့လို့ ပြောတဲ့လူလည်း ရှိတယ်။
မှိုကိစ္စက အခု မေးမိလို့တော်သေးတယ်။ ဆီပူထဲကြော်လိုက်ရင် မှိုသေမယ်ဆိုတဲ့ အသိကြီးစွဲနေတာ တစ်သက်လုံးပဲ။ ကြောက်တောင်ကြောက်သွားတယ်။ ဒီနေ့ပဲ သွေးသွားစစ်ရတော့မယ်။
ဒီစာပုံနှိပ်မယ်ဆိုတာတော့ ၀မ်းသာပါတယ်။မူရင်းပိုင်ရှင် ဒေါက်တာ ဒေါ်ခင်နွယ်ဝင်းဆီ ခွင့်တောင်းရပါအုံးမယ်။သူ ပြောချင်တဲ့ အချက်အလက်အတိုင်း ဟုတ်မဟုတ် editလုပ်ပေးဖို့ ပြောကြည့်ပါမယ်။သူမြန်မာပြည်မှာရှိနေသေးတယ်လို့ သိရပါတယ်။သူ့ ခွင့်ပြု ချက်ရမရ ကျမပြန်ပြောပေးပါမယ်။
လက်ဆောင်တွေက တွေ့ဆုံပွဲ မီမှာမဟုတ်လို့ မဲထည့်ဖောက်ပြီး သူကြီးမဲပေါက်သူကို ကျမ နောက်မှ ဆက်သွယ်ပြီးပေးပေးပါမယ်။ကျေးဇူးပါ။
ခုမှ ဖတ်​မိတယ် အာတီဒုံ​ရေ… ​ကျေးဇူးအကြီးကြီးတင်​ပါတယ်​… အိမ်​မှာ အ​မေ့ကို ​သေချာပြန်​ပြရမယ်​… အချိုမှုန့်​ နဲ့ ဆီ ကို အာကြီးသုံးတယ်​…
မီးဖိုချောင်ဝင်ရတဲ့ အိမ်ရှင်မများလက်မှာ တိုင်းပြည်ရဲ့ ကျန်းမာရေးတည်နေပါတယ်။
အချိုမှုန့်က မသုံးကာစမှာ အရသာမတွေ့ဖြစ်ပေမယ့် ကြာလာရင် အကျင့်ရပြီး အချိုမှုန့်ပါရင်တောင် စားမရဖြစ်လာမှာပါ။
နှစ်သစ်လက်ဆောင်ပို့စ်လေးအတွက် ကျေးဇူးပါ အာတီဒုံ….
အင်း..လိုက်နာရမှာတွေက မနဲပါလားနော..အဲထဲကမှ ငြုပ်သီးမှုန့်က သိပ်ကြိုက်တော့
ငရုပ်သီးမှုန့် ကြိုက်သူများတွက် ငရုပ်သီးအရှည်တောင့် အညှာဝါ၀ါ မှိုမပါတာ ရွေးဝယ်ပါ။ သံချောင်း ရှည်ရှည်မှာ သီပြီး မီးဖိုပေါ်ကင်(သို့) ဒယ်အိုးထဲ ထည့် လှော်၊ကြွပ်ရင် ငရုပ်ဆုံထဲထည့် ဖွဖွထောင်းရင် အလှော်မှုန့်ရပါတယ်။(မွှန်တော့ အတော်မွှန်ပါတယ်)
ကျမအကိုလည်း ငရုပ်သီးမှုန့်ပါမှ စားတတ်တော့ ယောင်းမက အပြင်ဆိုင်သွားစားကြတိုင်း ငရုပ်သီးမှုန့်ဘူးလေး ယူယူသွားပေးပါတယ်။ဦးမိုက်လည်း မမမီးကို စည်းရုံးထားပေါ့။
နာမည်ကြီး ငရုပ်သီးမှုန့်တံဆိပ်တွေလည်း မှိုပါတာကို ရှောင်ပြီးကြိတ်ပါတယ်။အရင်က ဖလံတွေ မှိုပါတာတွေ အရောင်းအ၀ယ်လုပ် ဆေးဆိုးကြပေမယ့် အခု ဆေးဆိုး ငရုပ်သီးမှုန့် တွေ စစ်ပြီးကတည်းက မှိုပါငရုပ် အရောင်းအ၀ယ်မရှိတော့ပါဘူး။နောက်ပြီး အအေးခန်းတွေနဲ့ ထားတာတကြောင်း ၊လှောင်သူတွေက မှို မကပ်အောင် ထားတတ်တာတကြောင်းကြောင့်(Mass scale) မှာ သိပ်တော့ ကြောက်ဖို့မလိုပါ။ဒါပေမယ့် လူတိုင်းဟာ ယုံကြည်စိတ်ချရတာ မဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့် ဖြစ်နိုင်ရင်တော့ ကိုယ်တိုင်သာ မြင်ရတဲ့ အတောင့်ဝယ်ပြီး အမှုန့်ကြိတ်စားစေချင်ပါတယ်။
အိမ်မှာ(small scale) ငရုပ်သီးတောင့်ဝယ်ထားပြီး လေလုံအောင် မသိမ်းတတ်တဲ့အခါမှာ မှိုတက်တတ်ပါတယ်။အဲသလို တွေ့ပြီဆိုရင်တော့ မနှမျောပဲ လွှင့်သာပစ်လိုက်ကြဖို့ သတိပေးချင်ပါတယ်။
အိမ်မှာဟင်းချက်ကြရင် မီးသွေးမီးဖိုဆိုတော့ မီးသွေးနှမြောလို့ ဆိုပြီး အမြဲတမ်း ဟင်းလည်းနွေးနွေးစားရ၊မီးသွေးလည်း အလဟသမဖြစ် ဆိုပြီး မီးဖိုပေါ်ပစ်ထားတာ။အခုတော့ ဒါကမလုပ်သင့်မှန်းသိသွားပြီ။ ကျေးဇူးပါ အန်တီရေ။
ပြီးခဲ့တဲ့လက သတင်းစာထဲ ပုံနှိပ်ဖေါ်ပြခဲ့တဲ့ ဘာသာပြန်လေးပါ။
နှလုံးသတ်သမား Trans fat
Trans fatခေါ် အပူပေးဖန်များပြီးအခဲဓာတ်ကဲသောဆီများသည် အမေရိကန် အစားအစာများတွင် အဓိကဇာတ်ကောင်နေရာက ပါဝင်နေသည်။
Baked ဖုတ်ထားသော မုန့်များ၊ မိုင်ခရိုဝေ့ဖ်တွင်အလွယ်တကူဖောက်ပြီးစားနိုင်သော ပြောင်းဖူးပေါက်ပေါက်များနှင့် အာလူးကြော်၊ ကြက်သွန်ကြော်၊ကြက်သားကြော်များသည် Trans fatများသောအစားအစာများဖြစ်သည်။
Trans fat ဆိုသည်မှာ ဓာတုဗေဒသဘောအရ သစ်ရွက်ဆီVegetables Oilကို hydrogenပေါင်းစပ်လိုက်ပါက ဆီအရေသိပ်သည်းဆပိုမိုပြစ်ခဲလာစေပြီး “partially hydrogenated oil” ဟုလည်းခေါ်သည်။
Trans fatများကို အစားအစာများတွင်ထည့်သွင်းချက်ပြုတ်ခြင်းဖြင့် ထိုအစားအစာ၏texture စားချင်စဖွယ်အမာအပျော့ထုထည်ကောင်းမွန်ခြင်း၊ အရသာပိုမိုကောင်းမွန်ခြင်း၊ ရေခဲရိုက်သိမ်းဆည်းစားသုံးရသောတာရှည်ခံစားသောက်ကုန်များ၏ ပုံမှန်အပျော့အမာအချိုးအစားကို ထိန်းပေးခြင်းတို့ကြောင့် အသင့်စားသုံးနိုင် သောစားသောက်ကုန်များတွင်သာမက လတ်လတ်ဆတ်ဆတ်ချက်ပြုတ်ရောင်း ချသောစားသောက်ဆိုင်ကြီးများတွင်ပါအနည်းဆုံးအကြော်အလှော်ဟင်းပွဲများတွင် Trans fatကို သုံးကြခြင်းဖြစ်သည်။
Trans fatသည် လူ့ခန္ဓာကိုယ်ရှိဆိုးကျိုးပြုCholestrol LDLကိုတိုးမြင့်စေရုံမျှမက ကောင်းကျိုးပြုCholestroal HDLကိုပါ ကျဆင်းစေသဖြင့် နှလုံးသွေးကြောကျဉ်းရောဂါ၊ နှလုံးသွေးကြောပိတ်ရောဂါများကိုဖြစ်ပွားစေသည်။ နှလုံ
းသွေးကြောကျဉ်းစေသည့် ပြည့်ဝဆီ( saturated fat) များထက်ပင် ပိုမိုဆိုးရွားသော အဆီဖြစ်သည် ဟု သိပ္ပံပညာရှင်များကတွေ့ရှိထားသည်။ နှလုံးသွေးကြောပိတ်ခြင်း၊ ဦးနှောက်သွေး ကြောပိတ်ခြင်း၊ လေဖြတ်ကိုယ်တခြမ်း သေခြင်းစသဖြင့် ကျန်းမာရေးကိုဆိုးရွားစွာ ထိခိုက်စေနိုင်သော Trans fatများသုံးစွဲခြင်း အား အစားအစာထုတ်လုပ်သောကုမ္ပဏီ များမှရပ်တန့်ရန် လုပ်ထုံးကိုFDAက အောက် တိုဘာလကုန်ကစတင်ပြင်ဆင်နေသည်။ အမေရိကန်တစ်ဦးသည် တစ်နေ့လျှင် Trans fat 1mgစားသုံးသည်ထားဦး၊ တနှစ်လျှင် heart attackရောဂါဖြစ်မှု လူပေါင်း၂သောင်းကိုကာကွယ်နိုင်ပြီး နှလုံးရောဂါကြောင့်သေဆုံးမည့်လူ၇ထောင် ကို ကာကွယ်နိုင်မည်ဟု FDAကဆိုသည်။
စားသောက်ကုန်ကုမဏီအများအပြားမှာ ယင်းတို့ထုတ်လုပ်သောအစားအသောက် များတွင် 2006FDA ချမှတ်သော အာဟာရပါဝင်မှုတံဆိပ်များကပ်ကာရောင်း ချပြီးTrans fatတားမြစ်ဥပဒေများသော New Yorkလိုဒေသမျိုးတွင် Trans fat ပါသည်ကိုတွေ့ရှိပါက ထိုစားသောက် ကုန်အား ချက်ချင်းတားမြစ်ခဲ့သည်။ 201
1ခုနှစ်တွင်လည်း Wallmartမှ 2016ခုနှစ်အထိ ရောင်းချမည့်စားသောက် ကုန်များတွင် Trans fatမပါဝင်ရန်သ ဘောတူုညီခဲ့သည်။ လတ်တလောတွင် စာသင်ကျောင်းများ၏ နေ့လည်စာများတွင် Trans fatမပါဝင်ရန်စည်းမျဉ်းများလည်း ချမှတ်ထားပါသည်။
Trans Fat ကိုမြန်မာလိုတော့ လွယ်လွယ်ကူကူဖြစ်အောင် ပြန်ကြော်ဆီလို့ သုံးတတ်ကြတယ်။
padonmar ရေ… အလည်ခဏ ဝင်လာရင်း ဒီ အဖိုးတန် စာစုလေးကို
ခေါ်သွားပြီနော်။ padonmar ကိုရော ဒေါက်တာ ဒေါ်ခင်နွယ်ဝင်း ကို ရော
ဟာ …တီချာကြီး လာတယ်ဟေ့။
လာအားပေးတာ ကျေးဇူးအထူးပါ တီချာကြီး။
အလည်တင်မက မကြာခဏပြန်လာပါ တီချာကြီးရယ်။
ပို့စ်တင်ဖို့ ကိုးကားရမယ့် အင်္ဂလိပ်စာတွေမေးချင်တာ တီချာကြီး မကြိုက်မှာစိုးလို့ မမေးရဲဘူး။
Please keep in touch,huh?
2014 အတွက် လက်ဆောင်ဆိုတော့ ခုယူလည်း မီသေးတယ် မဟုတ်လား။
အစားအသောက်အနေအထိုင်ဆင်ခြင်တဲ့အကျင့် မရှိတာကို ဆင်ခြင်ဖို့ မှတ်သားသွားပါတယ်။
ဒ့ါထက် ငံပြာရည် မသုံးခိုင်းတာ အချိုမှုန့်ပါမှာ စိုးတဲ့အတွက်ပဲလား။
အချိုမှုန့်မပါတဲ့ ငံပြာရည်စစ်စစ်ရရင်ကော သုံးသင့်သလား။
အငံဓာတ်အတွက် ဆားနဲ့ ငံပြာရည် အတူတူပဲလား သိချင်တယ်။
အချိုမှုန့်မသုံးနဲ့ဆိုလို့ အိမ်မှာ ဟင်းချက်ရင် ဆားနဲ့ ငံပြာရည်ကို အဓိကထား သုံးနေလို့။
ဒီပိုစ့်ကို ဖတ်ပြီး ခုရက်ထဲ ဖေ့စ်ဘုတ်မှာ တွေ့မိတာလေးကို သတိရမိတယ်။
အဖိုးတန်ပြီး အကျိုးများတဲ့ စာကြီးပေကြီးတွေဆိုရင် ကွန်မန့်လေး ၁ခု ၂ခုနဲ့ ပြီးသွားတတ်သလို
ဘာရယ်မဟုတ်ပဲ ပေါ့ပေါ့ပါးပါး ပျော်စေပျက်စေ ရေးထားတာလေးက ကွန်မန့်တွေအများကြီးနဲ့ စည်ကားနေတတ်တယ်တဲ့။
ငံပြာရည်မသုံးခိုင်းတာ အချိုမှုန့်တွေ ထည့်ပြီးဖော်တာ ဖြစ်တတ်လို့ပါ။
မျှင်ပုဇွန်လေးတွေကို ကြိတ်ပြီးရတဲ့ ငံပြာရည်ဆိုရင် ဆီအရောင်လိုမျိုး နီညိုညိုနဲ့ ချိုနေတာပဲတဲ့။
အဲသလိုမျိုး ငံပြာရည်ရရင်တော့ ကောင်းပါလေ့။
အစားအသောက်အနေအထိုင် ကျန်းမာရေးပညာပေးတွေအတိုင်း နေနိုင်ကြရင် ကျန်းမာသက်ရှည် လန်းဖြာဝေမှာပေါ့ အမရေ။
ဒါပေသည့် လူနေမှုအဆင့်အတန်းမြင့်ပြီး နေနိုင်ခွင့်ရကြပါမှ အဲလို ကျန်းမာရေးနဲ့ညီညွတ်မျှတအောင် နေလို့ရကြမယ်ထင်ပါတယ်။ တစ်ခါတလေ အသိတရားက ကျန်းမာရေးအရ မလုပ်သင့်မှန်းသိပေမယ့် ကိုယ့် လူနေမှုအဆင့်အတန်းအရ ၀င်ငွေနည်းလေတော့လည်း အခါခါကြော်ထားတဲ့ ဆီအိုးထဲက အကြော်လေး ၂ ခုကိုဝယ်ပြီး ဗိုက်ဝပြီးရော ထမင်းကြမ်းနဲ့စားနေရသူတွေ နှစ်နှစ်ချိုက်ချိုက်အိပ်ရေး၀၀ အိပ်ချင်ပါသော်လည်း ၀မ်းရေးကခက်မို့ မိုးမလင်းမှီ လမ်းပေါ်ရောက်ရှာဖွေနေရသူတွေကတော့ဖြင့် ဖြစ်တော့မှဖြစ်ရော မထူးဇတ်ခင်းရတာပေါ့လေ။ ဒါကြောင့်တစ်ခါတလေ စဉ်စားမိပါတယ် လူတိုင်းကျန်းမာဖို့ လူနေမှုအဆင့်အတန်းတွေမြှင့်ကြစို့ ဆိုပြီး အစိုးရက အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းတွေကို ပိုလို့တိုးမြင့်လာတဲ့ စီမံကိန်းတွေနှင့် ဆောင်ရွက်မှုရှိလာမယ်ဆိုရင်ဖြင့်လို့တွေးမိပြီး ရင်မောက ရေသောက်မိတာလဲ အခါခါပါဘဲဗျာ။
ဒါကြောင့် ပို့စ်အောက်မှာ ကိုယ့်ဖာသာကိုယ် အရင်ဆုံးမန့်ပြီး တောင်းပန်ထားတယ်လေ။
ဟောပြောသူက အမေရိကားက ဆရာဝန်မဆိုတော့ မြန်မာပြည်လူများစုနဲ့တော့ အံဝင်ချင်မှ ၀င်မယ်လို့။အဓိက ပညာတတ် လူလတ်တန်းစားကို ရည်ရွယ်ပါတယ်။
အင်တာနက်ပေါ် စာဖတ်နိုင်တဲ့ ပညာတတ်လူတန်းစားတွေတောင် ကျန်းမာရေးအသိမရှိလို့ ရောဂါထူပြီး အသက်မရှည်နိုင်ရင် ဆင်းရဲတဲ့လူတွေဖက်ကို ဘယ်လိုမှ ရှေ့ဆက်လို့ ရမှာ မဟုတ်ဘူးလေ။
ဒါကြောင့် တစတစ ဆွဲယူကြရပါမယ်။
နောက်ပြီး အင်တာနက်သုံးနိုင်တဲ့သူတွေမှာ Blender လေး တလုံးလောက်ရင်းလိုက်ရင်တောင် ဈေးပေါတဲ့ အသီးအရွက်တွေကြိတ်သောက်ပြီး ကျန်းမာနိုင်တဲ့နည်းဖြစ်ပါတယ်။ငွေကုန်ကြေးကျမများပဲ ကျန်းမာနိုင်ပါတယ်။
ခုတလော.. မြန်မာပြည်က.. စားသောက်ကုန်.. လယ်ယာထွက်ကုန်တွေ… ယူအက်စ်တင်ပို့ကြတဲ့သတင်းတွေကြားမြင်နေရတော့… ပြောချင်တာလေးပေါ်လာတယ်..။
မြန်မာပြည်က ကုန်သည်တွေ ယူအက်စ်ရဲ့ FDA စစ်ဆေးမှု.. ဥပဒေစည်းကမ်းတွေကို သတိထားကြစေချင်တယ်..။ သေသေချာချာ ငွေပေးအချိန်ယူလေ့လာကြစေချင်တယ်..။
“ထိ” ပြီဆို ငွေလိုက်မနိုင်ပါဘူးနော..။
သေသေချာချာ ပြင်ဆင်ထုတ်ပိုးပြီး …ဈေးများများယူကြပါလို့သာပါပဲ..။
ထိုင်းတို့..စကာင်္ပူတို့က.. ယူအက်စ်ကုန်သွင်းနေကျအင်ပို့တာကြီးးးးတွေ မြန်မာပြည်ကိုမွှေပြီး ကောက်ကြပါမယ်..
အခုဥပဒေသစ်တွေအရ.. ယူအက်စ်ကို မြန်မာပြည်သားတွေတိုက်ရိုက် အလုပ်လုပ်လို့ရနေပုံရပါတယ်..
ဒေါက်တာ ဒေါ်ခင်နွယ်ဝင်းနဲ့ သွားတွေ့ပြီးပါပြီ။
သတင်းစာမှာ ပုံနှိပ်ဖော်ပြဖို့ သဘောတူပါတယ်။
(ပို့စ်ထဲမှာ ဆေးနာမည် စာလုံးပေါင်းမှားနေတာလေး အမက ထောက်ပြလို့ ကျမပြန်ပြင်ထားပါတယ်။အရင်ကူးမိသူတွေ အမှတ်လွဲမှာစိုးလို့ပါ)
Inodoral ဖြစ်နေတာကို Iodoral လို့ပြင်ထားပါတယ်။
နောင်ကိုလည်း ဆေးပညာတွက် ပညာပေးဆောင်းပါးလေးတွေ ရေးပေးပါမယ်တဲ့။သူက မြန်မာစာမရိုက်တတ်တော့ လက်ရေးနဲ့ ကျမဆီပို့ပေး၊ကျမက စာပြန်စီပြီး တင်ပေးပါမယ်။သတင်းကောင်းပါ။
. ပြောစရာတွေကတော့ အများဂျီးဘဲဗျ
. ကျော့အဘွား အသက်ရှစ်ဆယ်ကျော်မှာ ကြွသွားတယ်
. ဂျပန်ခေတ်ဂဒဲဂ သတ္တုအိုးနဲ့ချက်စားဒယ်
. ကျော့်အဘနဲ့ သူ့မိန်းမ ကျော့်အမေ ခုနစ်ဆယ်ကျော်ဘီ မကြွသေးဘူး
. သူတို့လည်း သတ္တုအိုးနဲ့ဘဲ ချက်စားလာဒါ
. ကျော့်ဘဂျီင်္း ကြွသွားဘီ
. တစ်ရွာလုံး သူဆေးတိုက်လာတာ သတ္တုဓာတ်ရဘို့ သတ္တုအိုးနဲ့ ဆေးပြုတ်ပြီး
ကျန်းမာဖို့များဗျာ အစားရှောင် လေ့ကျင့်ခန်း လုပ်စရာ မလိုပါဘူး.. အာရောဂျံ ပရမံ လာဘံ ဥုံသိဒ္ဓိ ဂါထာ သက်စေ့ရွတ်.. အသက်တရာမနေရ ကြိုက်သလိုပြော.. (ဒါတောင် မိန်းမလေးယောက်ယူလိုက်ဦးနော်၊ ယောက်ကျားလိုချင်လည်း ထိုနည်းလိပ်ဂေါင်း)
ဘေးအန္တရာယ်ကင်းချင်ရင်.. ဓာရဏ ပရိတ်ရွတ်…
၉။ အာနန္ဒ ၊ချစ်သား အာနန္ဒာ။ ဣမံ ဓာရဏပရိတ္တံ ၊ ဤှဓာရဏပရိတ်တော်ကို ။ န၀န၀ုတိယာ သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓကောဋီဟိ ဘာသိတံ၊ (၉၉) ကုဋေကုန်သော မြတ်စွာဘုရားရှင်တို့ သည်။ ဘာသိတံ၊ ဟောတော်မူခဲ့ပြီးပြီ။ ဒိဋ္ဌိလာ၊ မကောင်းသဖြင့် ကြံသောသူတို့ ၏ အကြံအစည်ကိုလည်း သိမြင်နိုင်၏။ ဒဏ္ဋိလာ ၊ ဓား. လှံ. လက်နက်. လေး. မြား. မီးပေါက်. အမြောက် အစရှိသော ဘေးတို့ သည် မထိရောက်စေနိုင်။ မန္တိလာ ၊ မန္တန်. မန္တရား. ဂါထာ. အင်းအိုင် တို့ သည်လည်း ထက်မြက်နိုင်၏။ ရောဂိလာ ၊ ရောဂါအန္တရာယ်မျိုးတို့ ကိုလည်း မထိရောက်နိုင်။ ခရလာ၊ ကြမ်းတမ်းခက်မာသော အနာမျိုးတို့ ကို လည်း ပယ်ဖျောက်နိုင်၏။ ဒုဗ္ဘိလာ ၊ ကြိုး. ထိတ်. သံခြေကျင်း. တွင်းလှောင်. တို့ မှလည်း လွတ်စေနိုင်၏။ ဧတေန သစ္စ၀ဇ္ဇေန ၊ ဤမှန်သောသစ္စာစကားကြောင့်။ သဗ္ဗဒါ ၊ အခါခပ်သိမ်း။ မေ၊ ငါ့အား။ (တေ၊ သင့်အား။ အမှာကံ၊ ငါတို့ အား။ တုမှာကံ၊ သင်တို့ အား) ။ သောတ္တိ ၊ ချမ်းသာခြင်းသည်။ ဟောတု ၊ ဖြစ်ပါစေသတည်း။
အန်တီရေ..လက်ဆောင်ကတော့တကယ့်အချိန်ကိုက်ဖြစ်နေတယ်.. :)) အန်တီ့အရင်တခါပို့စ်ထဲပြောသလိုပဲ သေရမှာလုံးဝမကြောက်ပေမယ့် နာမှာကြောက်တော့ အစ်ကိုဝယ်ဖတ်တဲ့ ကျန်းမာရေးစာအုပ်တွေဖတ်မိပြီး အပန်းမကြီးတာတွေ စဆင်ခြင်နေတယ်ရတယ်..
ခရစ်လေး မနာအောင် ဦးကြောင်ကြီး နှိပ်ပေးမယ်.. လာခဲ့ ဆရာကြောင် လက်သည်းရှိတယ် နာရဲနာကြည့်စမ်း…